Sidee loo Diiwaan Waxqabadka Screen la Sound
> Resource > Record > Record Screen Waxqabadka la Sound
Waxaad ka heli kartaa waa adag tahay si ay u qoraan hawlaha screen iyo waqti isku mid ah ku darto dhawaaqa. Laakiinse haatan la DemoCreator - Barnaamijka xoog badan oo taariikhqorihii screen weli fudud ah, waxaad si fudud u abuuri karaan a screencast sheeko ku salaysan fudayd. Halkan waxaan ku baran doonaa sida loo isticmaalo awoodaha audio sare DemoCreator ee ku darto iyo edit audio filimada screencasting aad.
Taariikhqorihii screen waxa uu ku siinayaa 3 hab oo ay ku darto audio si ay cajalado shaashadda. Dooro habka aad jeceshahay:
Habka 1: audio Record waqtiga qabashada
Habka 2: audio Record waqti Falanqeynta
Habka 3: Import file maqal ah
Qor hawlaha shaashadda iyo dhawaaqa waqti isku mid ah.
Daahfurka DemoCreator dooro hab goobta wax lagu qoro oo lagu qoro, ka hor inta aanad bilaabin qoro hawlaha screen, waxaad sidoo kale goobaha audio ah si ay u qoraan karaan Sheeko aad video demo.
Waxaa jira 3 audio ilo si ay u doortaan: Microphone, rikoodh Mix, iyo Input Rear . Dooro Microphone sida qalabka duubista haddii aad rabto si ay u qoraan waxa aad dhihi; haddii aad rabto si ay u qoraan waxa aad ka maqasho computer ama hadle, waxaa laga yaabaa in aad xulan Guddoomiyaha PC sida ilo lagu qoro; haddii aad rabto si ay u qoraan audio screen ka qaar ka mid ah ilaha kale, isku xiro qalabka audio la dekedda Input Rear oo dhigay ikhtiyaarka duubista sida Input Rear.
By riixaya icon makarafoonka, waxaad tagi kartaa in aad tijaabiso qalabka duubista si uu u hubiyo in uu u shaqeeyo ama ma.
Wixii makarafoonka: La hadal makarafoonka oo waxaad arki doontaa heerka dareenka audio haddii qalabka lagu duubo u shaqeeyo.
Wixii Gudoomiyaha PC: Play goosin ka mid ah music on your computer oo waxaad arki doontaa heerka dareenka audio haddii qalabka lagu duubo u shaqeeyo.
Haddii ay jirto dhibaato ah kuma qabo qalab wax lagu qoro, riix Record button iyo aad u bilowdaan duubo.
Fiiro gaar ah: rikoorrada screen badankoodu waxay fursad dadka isticmaala si ay u qoraan hawlaha shaashadda kombiyuutarka la audio. Si kastaba ha ahaatee, u hagaagsan oo ka mid ah audio iyo video runtii waa dhibaato weyn. Sida video iyo maqal ah si xawli caadi ma kala yihiin midba midka kale, lana siii video clip ah ee waqtiga ayaa sidoo kale ka dhigan tahay oo jaraya aad Sheeko la socoto waxaa la. Taasi ma noqon lahayd waxa aad rabto. Ama haddii screencast aad duubay waa uu fiican yahay, laakiin waxaa jira wax qalad ah aad sheeko, waxaad u leedahay in guuleysatey aad Sheeko iyo record Screenshot ilaa aad heshay waa xaq. Sidaas, muujinta ah ee lagu qoro sheeko ka dib markii lagu duubo shaashadda noqon kartaa xal wax ku ool ah si ay u sameeyaan screencast ku kalifay.
Haddii aadan ku qanacsanayn ama aad u baahan tahay in ay wax ka bedesho la audio aad duubay oo ay la socdaan aad screencast, aad rerecord karaa audio, halka previewing screencast lagu duubay dhisay-in editor audio.
Riix ah Audio button oo waxaad tagi kartaa Tifaftiraha audio.
Ka hor aad duubista, waxaad riixi kartaa ka Settings icon in ay doortaan iyo tijaabin qalabka audio .
Dooro qayb ka mid ah bogagga oo aad rabto in aad si ay u qoraan Sheeko inay, oo guji Record badhanka hoose ee Audio Editor oo aad bilaabi kartaa in aad duubista. Si aad u hagaagsan Sheeko aad la filimka, waxaad ka arki kartaa filimka duubay synchronously iyo samayn duubista codka.
Goorta uu dhamaado, riix Stop button.
Guji ee Play badhanka si aad u eegto filimka duubay la audio. Dheeraad ah oo dheeraad ah, waxaad beddeli kartaa sheeko ka qalabka tafatirka (sida tirtirto iyo geliso aamusay ) on Tifaftiraha audio.
Habka 3: Import file maqal ah la editor audio
Ka sokow laba hab oo kor ku xusan, waxaad samayn kartaa dajiyaan file maqal ah si ay u duubo shaashadda sida music soo jeeda.
Back to Tifaftiraha audio, waxaa jira ah Import button, waayo, waxaad faylka music doonayay in uu ku daro ka disk deegaanka.
Marka lagu qoro ay ka badan tahay, aad file maqal ah oo qaab MP3 galka mashruuca ka heli kartaa.
Sidaas, kaliya abuuro codkaaga-badan screencast Sheeko la DemoCreator !